News of the industry - Jiang Lin သံမဏိကော်ပိုရေးရှင်း
ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ (+86) 022-87196500
◎ hot rolled plate coil: 30 hot rolled plate coil in major cities nationwide price shock operation, as of press time 4.75 hot rolled plate coil national average price 3714 ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။, compared to the previous trading day flat.In general, this week is expected to hot rolling market price shock operation.
◎ medium and heavy plate: 30 days domestic medium and heavy plate market price is stable and weak, the national average price of 20mm board is 3817 ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။,4yuan/ton lower than the previous trading day.Overall, the short term in the thick plate market up or down dilemma, is expected this week in the thick plate prices to high volatility.
အထက်ပါဓာတ်ပုံများသည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သောပြဿနာများဖြစ်သည်. Jianglin သည်ဤပြသနာများမဖြစ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ ပိုမိုသိရှိရန်ဒီမှာနှိပ်ပါ
Yuanjiabao ကျေးရွာ, Chagugang, Wuqing ခရိုင်, တီကျင်း, တရုတ်
ရှန်ဟိုင်း qukin သံမဏိကော်ပိုရေးရှင်း